GNOME 3.30 ichave neapp yekuteerera redhiyo online yemahara | Linux Vakapindwa muropa
Chikwata chiri kuseri kweprojekti yeGNOME chataura nezve app Internet Radio Locator iyo sezviri pachena inosvika nekusarudzika neGNOME 3.30 nyowani painoburitswa zviri pamutemo.
GNOME 3.30 iri muchikamu chakasimba kwazvo chekuvandudza, iine mufananidzo wechipiri kuuya vhiki ino, nekuda kweizvi, timu yekusimudzira yakagadzirisa ramangwana rezvirongwa peji rinosanganisira iyo Internet Radio Locator application, yakagadzirirwa GNOME 3.xx.
Internet Radio Locator ndeye yakavhurwa sosi graphical application yakagadzirwa mune yazvino GNOME / GTK + tekinoroji iyo inobatsira vashandisi vayo kuwana nhepfenyuro kubva kunzvimbo dzakasiyana dzakatenderedza nyika. Parizvino tsigiro inotsigira kutsvaga kwenzvimbo kuburikidza nerugwaro, izvo zvinopa zviyero zvisere makumi masere nemasere zvakapoterera maguta makumi manomwe nenomwe, hongu, nekufamba kwenguva mamwe maredhiyo achawedzerwa uyezve pachave nenzira nyowani dzekutsvaga.
Nakidzwa nenhepfenyuro kubva kutenderera pasirese muGNOME 3.30
Kutenda kuInternet Radio Locator application, vashandisi veGNOME 3 vachakwanisa kunakidzwa nenhepfenyuro dzakawanda nekungobaya mashoma, kungava nekuisa chitupa pamepu kuti uterere kune zviteshi zveguta iro kana nekuisa zita reguta. mubhokisi rekutsvaga iro rine auto yakazara basa.
GNOME 3.30 inotarisirwa kuburitswa munaGunyana 5 yegore rimwe chete iri rekutanga vhezheni yekuisa iyo Internet Radio Locator application nekukasira. Kunyangwe izvozvi iwe uchigona kuisa yazvino vhezheni yeichi chishandiso nekukodha pasi nekuisa iyo yepamutemo sosi
Pamusoro pechikumbiro chekutsvaga nhepfenyuro dzeRadio, GNOME 3.30 inosvitsa gadziridzo yakati wandei nezve iyo tichava neruzivo rwakawanda munguva pfupi, yakagadziridzwa kutanga uye kukiya skrini, ichitadzisa kuvhurwa kwemashandisirwo uye mabhainari kubva kuNautilus faira maneja uye zvimwe zvakawanda shanduko dzavanoda. munguva pfupi uone mwenje zvese munhau uye pawebhusaiti yepamutemo yeprojekti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » GNOME 3.30 ichave neapp yekuteerera redhiyo online mahara